(tonga teto avy amin'ny Ngazija)
Sarin-tanin' i Ngazija
I Ngazidja na Kômôro Lehibe dia nosy sady fanjakana mizaka tena isan' ny Firaisan' i Kômôro, ao amin' ny tamba-nosin' i Kômôro. Izy no nosy lehibe indrindra sy be mponina indrindra (410 736 tamin'ny taona 2016) ao amin'ny tamba-nosin' i Kômôro. I Moroni no renivohiny, izay renivohitr' ilay firaisam-panjakana mizaka tena.
I Moroni, renivohitr' i Kômôro
I Ngazijda dia manana halava mirefy 77 km sy sakany mirefy 27 km ary velarana 1 146 km2. Izy no nosy zandriny indrindra ao amin' ilay tamba-nosy, izay vokatry ny fipoahana afotroa. Roa ny afotroa izay mandrafitra an' io nosy io, dia ny afotroa La Grille ao avaratra (1 087 m) izay mihalevona vokatry ny fikaon-tany, sy i Karthala ao atsimo (2 361 m) izay nipoaka farany tamin' ny taona 1977.
Sainan' i Ngazidja
Lavak' afotroan' i Karthala
Ny lembalemba, izay manana salan-kaambo 600 hatramin' ny 700 m dia mampitohy tendrombohitra roa. Amin' ny maha zandriny indrindra an' i Ngazidja dia manidy sady be karao-baro ny taniny ka tsy mitazona rano. Noho izany, ny ranomamy ampiasain' ny mponina amin' io nosy io dia rano tahirizina mandritra ny fiavian' ny oram-be. Ahitana alan' orana midadasika ny eny amin' ny solampin' i Karthala.
Tsy ahitana harandriaka ny nosy Ngazidja, ary tsy ahitana seranan-tsambo arifomba hiantsonan' ny sambo. Ao amin' io nosy io no misy an' i Moroni renivohitr' i Kômôro nanomboka tamin' ny taona 1962.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngazidja&oldid=1039262"
Voaova farany tamin'ny 25 Oktobra 2021 amin'ny 08:37 ity pejy ity.